लुम्बिनी ...यतिसम्म नाटक भयो! - Malayakhabar
होम पेज फिचर लुम्बिनी …यतिसम्म नाटक भयो!
लुम्बिनी …यतिसम्म नाटक भयो!
माओवादी केन्द्रका २ र जसपाका ४ सांसद कारबाहीमा परेपछि सांसद संख्या ८१ रहेको लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक पर्छन्। सोही अनुरुप एमालेले ४१ सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाए पनि पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको सपथ खाँदासम्म हस्ताक्षर गरेका ४ जनाले उनको साथ छोडिसकेका छन्। तीनजना विपक्षी गठबन्धनमा गएका छन् भने एकजनाले पदबाटै राजीनामा दिएका छन्। यो समाचारनागरिक दैनिकमा छ ।
अघिल्लो लेख पेटको बच्चालाई अभिनेत्री प्रीयंका कार्कीले यसरी खुवाईन् जुस।
पछिल्लो लेख कोरोना माहामारी : पीपीईले छोपेको पीडा।
अन्तत:फुटबाट जोगियो जसपा,महन्थ र उपेन्द्रको संयुक्त विज्ञप्ति,सरकारमा सहभागी नहुने तर पाए नेतृत्व गर्ने।
काठमाडौं := जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल फुटबाट जोगिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मत, लुम्बिनी प्रदेशमा सांसद कारवाही, संसदीय दलको नेता चयन...